Fiteny noristany - Wikipedia
Ny fiteny noristany na fiteny pasay dia zana-tsampan' ny fiteny indô-iraniana. Ireo fiteny ireo dia tenenin' ny olona miisa 500 000 any ho any, indrindra ao Nuristan, any Afganistàna. Taloha izy ireo dia nantsoina amin' ny anarana fanaratsiana hoe fiteny kafiry ("fitenin' ny tsy mino ny fivavahana silamo). Ny faritra onenan' ny vahoaka noristany dia ao amin' ny tapany atsimon' ny tendrombohitra Hindu Kush, sady tondrahan' ny renirano Alingar ao andrefana, ny renirano Pech ao afovoany, ary ny renirano Lndai Sin sy Kunar ao atsinanana.
Ny faritanin' i Nuristan ao Afganistana
1 Ireo fiteny noristany
1.1 Fiteny noristany avaratra
1.2 Fiteny noristany atsimo
Ireo fiteny noristanyHanova
Fiteny noristany avaratraHanova
Ny fiteny noristany avaratra dia ahitana ny fiteny kamkata-vary sy ny fiteny vasi-vary (na prasona). Ny fiteny kamkata-vary dia tenenin' ny olona miisa 40 000 any ho any ao Bashgali, miseho amin' ny endrika fitenim-paritra kata-vary sy kamviry ary momviry. Ny fiteny vasi-vary dia tenin' ny olona miisa 8 000 any ho any ao Prasuni.
Fiteny noristany atsimoHanova
Ny fiteny noristany atsimo dia mamondrona ny fiteny askono, ny fiteny oaigaly, ny fiteny tregamy ary ny fiteny zemiaky. Ny fiteny askono dia tenenin' ny olona miisa 40 000 any ho any ao Ashkun. Tenenin' ny olona miisa 12 000 any ho any ao Kalasha-ala ny fiteny oaigaly. Ampiasain' ny olona miisa 3 500 any ho any ao Gambiri ny fiteny tregamy. Ny fiteny zemiaky kosa dia tenenin' ny olona 500 any ho any ao amin' ny faritanin' i Kunar.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_noristany&oldid=999747"
Dernière modification le 3 Janoary 2021, à 11:14
Voaova farany tamin'ny 3 Janoary 2021 amin'ny 11:14 ity pejy ity.